मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्ड अवरूद्ध, यस्ताे छ कारण ! - Info Nepal
INFONPLसमाचारमुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्ड अवरूद्ध, यस्ताे छ कारण !
हावाहुरीले रूख र बिजुलीको पोल ढाल्दा मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ को पानीधार भन्ने स्थानमा हावाहुरीले रुख र बिजुलीको पोल ढाल्दा सो सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा रुखलाई पन्छाउने प्रायस भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले च`क्का`जाम गरेका छन् । वडा नम्बर ७ को पुन: मतगणनाको माग गर्दै कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले राजमार्गमा च`क्का`जाम गरेका हुन् ।
सुरक्षाकर्मीले ढुं` गा`मु` ढा गर्ने कांग्रेसीलाई धपाउन २ सेल अ`श्रु`ग्याँ`स प्रहार गरेको सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए । लगत्तै कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले राजमार्गमा नाराबाजीसहित टा` यर बा` लेर च` क्का` जाम गरेका छन् । अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।